KEYDMEDIA - First Modern Somali News & Video Website - Warar - Warbixin: Arday Indha La’ oo dalbanaya Waxbarshada Dugsiga Sare & Jaamacadda
Saturday 20 June 2015 11:00
Muqdisho (KON) - Arday aan lahayn Araga oo ku nool Magaalada Muqdisho, ayaa ku fekerayo oo hamiga ku haya inay sii wataan Waxbarashooda Heerka sare, kadib markii ay dhamysteen Dugsiga Hoose & Dhexe.
Amaal C/llaahi Cumar, waa 15 Sani Jir, waxay dhawaan u fariisatay Imtixaanka Fasalka Sideedaat (Class Eight) ee Iskuulka lagu magacaabo Al Basir oo ku yaalla Muqdisho, waxay codsanaysaa inay hesho Waxbrashada Dugisa sare.
Waxay sheegtay inay aad uga baqayso inay wayso Hamigeeda ah inay sii wadato Waxbarsahdeeda Heerka Sare haddii iyada iyo kuwa kale ee lamidka ah aan Garab ka helin Shacabka Soomaaliyeed.
C/raxmaan Jeylaani Maye, waa Arday kale oo isna kamid ah Iskuulka Dadka Araga la' ee Al Basir, wuxuuna Sanadkan ka baxay Dugsiga Dhexe si lamid ah Amaal, waxaana uu qabaa Dareen ah inuu wax u baran karo sida Arday haysta Araga.
"Dad badan ayaa waxay aaminsan yihiin in Qof aan waxba arkeynin wax baran karin, waxaan leeyayahay taasi waa Been, aniga waxaan aaminsanahay inaan wax baran karo illaa Heer Jaamacadeed," ayuu yiri C/raxmaan.
Maamulaha Iskuulka Al Basir ee dhigtaan Ardaydan oo lagu magacaabo Abuukar Cali, ayaa sheegay inaysan jirin Qorsho markii hore ay u dejiyeen Ardayda oo ah inay helaan Waxbrashada Dugisa sare markii ay dhamaystaan Hoose & Dhexe.
Keydmedia Online - Xafisika Muqdisho
Isgaarsiinta qeybo kamid ah Gobolka Jubbada Dhexe oo Hawada laga saaray